Waa Guri deegaan ah oo haysto wado weyn Xaafada Taleex ee degmada Hodan. Agagarka masaajidka Ramadaan. waxaa ka dhisan 5 Qol, 2 Musqul iyo kushiin. Cabiisana waa 13x13M2. Qiimaha waa $130,000 iyo Heshiis
Faah faahinta, kala soo xiriir shirkada Kirosom Real Estate Solutions oo kuu hayso Guryo iyo Dhulal iib ah.
Guri IIB ah - Taleh, Somalia